हङकङमा जन्मेका बच्चा लिएर यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा! | WWW.HATTERI.COM
You are here : WWW.HATTERI.COM » Article, Featured » हङकङमा जन्मेका बच्चा लिएर यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा!
हङकङमा जन्मेका बच्चा लिएर यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा!
प्रकाशित मिति Saturday, November 11, 2017
हङकङमा जन्मेका नानीहरु लिएर देश विदेश यात्रा गर्दा तपाईंहरु कतिले समस्या भोग्नुपरेको होला भने कतिले यस्तो स्थितिको सामना गर्नु नपरेको हुनसक्छ ।
कृपया जानकारी राख्नुस् र अरुलाई पनि सेयर गर्नुहोला!
हङकङमा जन्मेका बालबालिकालाई ११ वर्ष नपुगे सम्म आइडी कार्ड दिइँदैन तर उनीहरु पर्मानेन्ट रेसिडेन्टका हकदार हुन्छन् । नेपाली पासपोर्ट चलाउने हामीले
हाम्रा बालबच्चाको लागि नेपाली पासपोर्ट नै लिएका हुन्छौं । हङकङले जारी गरेको उनीहरुको बर्थ सर्टिफिकेट मात्रै बोकेर पनि हामीले नेपाल आउन जान काम चलाइरहेका छौं । तर यसो गर्दा हङकङ इमिग्रेसनमा जानकारी रुजु गर्न धेरै समय लाग्छ, र इमिग्रेसनमा धेरै समय लाग्न सक्छ । अझै मकाउ लगायत अन्य देशमा जाँदा झमेला हुनसक्छ, नानीहरुलाई भिसा नै दिइँदैन ।
त्यसैले बाबु नानीहरु लिएर यात्रा गर्दा तपाईंले दुईवटा कुराको ख्याल गर्नुपर्छ;
१. उनीहरुको जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
बच्चा जन्मेको १ साल भित्र नजिकैको जन्मदर्ता शाखाबाट यो बनाइसक्नु पर्ने हुन्छ, बच्चा जन्मेको ४२ दिन भित्र बनाएमा यो निशुल्क उपलब्ध हुन्छ ।
२. उनीहरु हङकङमा जन्मेका हुन र पर्मानेन्ट आइ डी का हकदार छन् भन्ने प्रमाण पत्र (Eligiblity for Right of abode)
आवश्यक कागजहरुका साथ फाराम भरेपछि यो नि:शुल्क उपलब्ध हुन्छ ।
यो प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नको लागि ROP145 नम्बरको फाराम भरेर इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टको २५ औं तलामा बुझाउन वा हुलाक मार्फत पठाउन सकिन्छ ।
फाराम यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
३. उनीहरु हङकङ आइ डी का हकदार छन् भन्ने जनाउने स्टिकर जुन बच्चाको पासपोर्टमा टाँसिन्छ (Endorsement label for Travelling) बच्चाको पासपोर्ट र १ नम्बरको कागजातको साथ २ सय डलर शुल्क तिरेर यो पाउन सकिन्छ ।
यो स्टिकर प्राप्त गर्नको लागि ROP145 नम्बरको फाराम भरेर इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टको २५ औं तलामा बुझाउन सकिन्छ । कारणवश बच्चाको पासपोर्ट फेर्नु परेको खण्डमा अर्को पासपोर्टमा सार्न ५ औं तलामा गएर फाराम भरी नयाँ स्टिकर लिनुपर्ने हुन्छ ।
« विद्यार्थी र शिक्षक बीच मुक्का हानाहान…
दिउँसै ३० लाख डलर लुटेर फरार.. »